Hlola iziqhingi zaseCayman - World Tourism Portal
Hlola iziqhingi zaseCayman
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili e-Cayman Islands
Okufanele ukwenze e-Cayman Islands
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Cayman Islands
Bukela ividiyo ekhuluma ngeziqhingi zaseCayman
Hlola iziqhingi zaseCayman, iqembu leziqhingi e I-Caribbean Ulwandle cishe amakhilomitha angamashumi ayisishiyagalolunye eningizimu Cuba. IGreatman Cayman inkulu kakhulu kunayo yonke, inabantu abaningi kakhulu futhi ivakashelwa kakhulu. ILittle Cayman neCayman Brac, ngokubhekisele kuzo njengeziqhingi zaseSista, bahlala kude, basemakhaya futhi banabantu abaningi. Iningi lezivakashi lifika ngomkhumbi wesikebhe ukuyochitha usuku eGeorgetown noma benze eminye imisebenzi eGrand Cayman. Labo abavakashela eCayman bavame ukuza bezodonsa kahle ama-scuba diving noma ama-sandwich amhlophe, amanzi olwandle, namahhotela akhethekile weSeven Mile Beach. Iziqhingi zaseCayman zisebenza njengendawo ezilawula iBritish Overseas Territory. IGeorge Town iyidolobha elikhulu futhi inabantu abangama-20 000 kuphela, okuyindawo enkulu kunazo zonke eziqhingini.
IGeorge Town - inhloko-dolobha yeziqhingi, indawo enkulu kunazo zonke, kanye nomnotho kanye nezokuvakasha. Futhi kuyindawo ethekwini elikhulu lesikebhe. Isilinganiso sabantu ababalelwa cishe i-20 000 sinezakhamuzi eziningi njenge-10 000 ukuya kuma-15 000 eyizinkulungwane zabavakashi bezikebhe ezihamba ngomkhumbi nezivakashi ngezinsuku ezimatasa. IGeorge Town inendawo encane yedolobhana engumlando enezinto eziningi ezikhangayo, izindawo zokuthenga kanye nezindawo zokudlela ngaphakathi kokuhamba imizuzu embalwa ukusuka ethekwini lesikebhe.
I-Mile Beach eyisikhombisa - indawo ende yolwandle lwesihlabathi esimhlophe, amanzi ezolile atholakala, kanye namahhotela akhethekile amahle. Kukhona nezitolo zokudlela ngaphesheya komgwaqo. Ibhishi ngokwalo lisesidlangalaleni futhi lungafinyeleleka ngezindlela ezimakwe "zokufinyelela ogwini lomphakathi" uma ungahlali kwelinye lamahhotela.
IWest Bay - Isifunda esisenyakatho neGeorge Town ngasentshonalanga yesiqhingi. Ikhaya lezakhamizi eziningi zaseCaymanian kanye nokuheha izivakashi okudumile njengeTurtle Farm kanye neDolphin Discovery.
IBodden Town - Indawo encane yokuhlala ngaseningizimu yesiqhingi.
I-East End - Isifunda esikude kakhulu empumalanga yesiqhingi. Kunabantu abaningi futhi abasekhaya ezindaweni zokungcebeleka ezimbalwa.
INyakatho Side - Ugu olusenyakatho yesiqhingi, entshonalanga komgwaqo uFrank Sound Road. Ikhaya kuya ezindlini ezigudle ulwandle, izindawo zokungcebeleka ezimbalwa, nezindawo ezimbalwa zokuvakasha kubandakanya iRum Point ne-Starfish point.
UCayman Brac -
Iziqhingi zaseCayman zazivela koloni Jamaica yiBritish phakathi ne-18th ne-19th century. Iphathwe ngabakwaJamaica bevela kwi1863, bahlala bengabondli baseBrithani ngemuva kwe-1962 lapho owokuqala ezimele.
Ngaphezu kwebhange (iziqhingi azinayo intela eqondile, ezizenza indawo yokufakelwa eyaziwayo), ezokuvakasha zihamba phambili, okuhloswe ngazo emakethe kanokusho nokunikeza ikakhulukazi izivakashi ezivela eNyakatho Melika. Ukufika okuphelele kwabavakashi kungaphezu kwezigidi zama-2.19 ku-2006, yize iningi lezivakashi lifika ukuvakasha kwemikhumbi ngosuku (izigidi zama-1.93). Cishe i-90% yokudla kweziqhingi nokudla kwabathengi kumele kungeniswe ngaphakathi. AmaCaymani ajabhela omunye umphumela ophakeme kakhulu nge-capita eyodwa futhi engenye yezindinganiso eziphakeme kakhulu zokuphila emhlabeni. Iziqhingi zaseCayman zingenye yeziqhingi ezicebe kakhulu hhayi kuzo I-Caribbean kepha emhlabeni.
Imashi yasolwandle. Ihlobo elifudumele nelina imvula (ngoMeyi kuze kube ngu-Okthoba) futhi kupholile, Indawo enhle yeholide, ubusika obuomile (ngoNovemba kuya ku-Ephreli).
Isisekelo selite esinezitezi eziphansi esizungezwe zezixhobo zamakhorali. Iphuzu eliphakeme kakhulu: I-Bluff kuCayman Brac, e-43m.
Ukuqashwa kuvame ukuphepha, kunokwethenjelwa, futhi kutholakala kalula. Kufanele ube uneminyaka engu-21 ukuqasha imoto. Ukusetshenziswa kwe-Seatbelt kuyimpoqo. Izivakashi ezifisa ukushayela esiqhingini kufanele zithole ilayisense lendawo lesikhashana elibizwa ngemvume yezivakashi ngokukhombisa ilayisense lokushayela ekhaya nangokukhokha imali engu- $ 16 CI. Ama-ejensi wokuqashisa anikela ngaleli sevisi. Izivakashi ezihlela ukuboleka imoto kumngane noma isihlobo kudingeka zithole imvume esiteshini samaphoyisa noma eMnyangweni Wezimoto Nokushayela Kwezincwadi Zokushayela.
Uma ungakukhathaleli ukushisa noma ilanga, ukuhamba kuyindlela enhle yokuthola iGeorgetown noma i-Seven Mile strip. Izindawo ezinabantu abaningi zinemigwaqo eseceleni futhi isiqhingi siphephile impela kubahamba ngezinyawo abajwayela ukwenza ingqondo (isib. Ukugwema ukuhamba wedwa ebusuku ezindaweni ezilahliwe zigqoke ubucwebe obubukeka bubucayi). Abahamba ngezinyawo bangase bakuthole kudidayo noma kungakhululeki ukuthi badunyiswa kaningi ngenkathi behamba. Lokhu kujwayelekile lapha futhi akulona uphawu lwentukuthelo evela kubashayeli! Ngenkathi kukhona iziteshi zamabhasi eziqokiwe, amabhasi (abukeka njengamaveni amancanyana) imvamisa amakwa nje ngabantu abahamba ngezinyawo abahamba ngomgwaqo. Ngakho-ke i-honking imane “iya phezulu” lapho ibhasi lisondela, uma ngabe unethemba lokuthatha.
Izinhlobonhlobo zesiNgisi zeCommonwe ziyilimi olusemthethweni olubhaliwe futhi isihlonipho sendawo sikhulunywa cishe wonke umuntu. Ama-Caymanii omdabu anesihlonipho esimnandi nesingqayizivele esinamajika amaningi ebukekayo emabintana. Isibonelo, kumahlebezi eCayman akezwakali “ngokusebenzisa amagilebhisi”, esikhundleni salokho azwakala “ngomgwaqo we-marl”. Abasendaweni bathi uCayman njengoKay-MAN, hhayi uKAY-min.
ICayman Islands I-National Museum, I-Harbour Drayivu, iGeorge Town. F 9AM-5PM, Sa 10AM-2PM.
Ft. UGeorge usala, Harbour Dr. noFort St, eGeorge Town. Izinsalela zenqaba ye-1790 eyakhelwe ukuvikela itheku.
ICayman Maritime Treasure Museum, North Church St., George Town. Ukwakhiwa kwesikebhe, ukugwedla kanye namaphasi.
Isihogo, West Bay. Lesi yindawo evamile yokuvakasha, evame ukukhathazwa yilabo abaya lapho. Kuqukethe ukwakheka kwamatshe amnyama acijimayo okucatshangwa ukuthi kufana nokuthi iSihogo sinjani. Ungathola amakhadi okuposa abhalwe phansi lapho, futhi kunezitolo ezimbalwa zezipho ezithengisa zonke izikhumbuzo ze-Hell-themed engacatshangwa.
Ibhishi leBarkwain, ngaphambili elaliyiCayman Turtle Farm, liyipaki lasolwandle i-24-acre. Ipulazi nje leGreen Sea Turtle elisemhlabeni wonke, liyikhaya lezimfudu zasolwandle ezingaphezu kwe-16,000, ezisukela ngosayizi kusuka kumakhilogremu ayisithupha kuya kumakhilogremu angamakhulu ayisithupha futhi manje sinezindlu zezimbotshana. Ibhishi leBarkwain libala i-1.3 Million Gallon yeSaltork Snorkel Lagoon lapho izivakashi zingabhukuda ngezimbila nezinye izimpilo zasolwandle; ithangi le-Predator (elibukelwa ngabadobi) ligcwele oshaka kanye nezimfudu ezinkulu; indawo engcwele ye-Aviary ne-Iguana; I-Natural Trail ne-“Blue Hole” Sunken Cave, izinkambo zamapulangwe ezihamba ngokufinyelela okugcwele ukuzungeza amachibi okuzalela; I-Caymanian Heritage Street enamakhanda asepherishi-eceleni kanye nezindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela eziqukethe cuisine yasendulo neyesimanje; ichibi elikhulu elinamanzi kanye nesimo sokucwaninga kwezobuciko kanye nesikhungo semfundo sigxile kulondolozo lwamfudu wasolwandle.
I-Pedro St. James castle, iSavannah. Lesi sakhiwo samatshe se-1780, sizungezwe isitoreji, sinemibukiso ye-multimedia ngehora.
Indlovukazi u-Elizabeth II Botanic Park, eNyakatho Side. I-9AM-6 yansuku zonke: 60PM. Okuningi engikubona lapha, nendawo yesivakashi, umzila omfushane wokuhamba, i-iguanas eluhlaza okwesibhakabhaka, ne-c. I-1900 Cayman epulazini nengadi yesihlabathi.
ICamana Bay. Indawo encane eseduze kwaseGeorgetown enenhlanganisela yezitolo, izindawo zokudlela, ubuciko bangaphandle nendawo yomphakathi.
Igalari kaZwelonke yeziQithi zeCayman. Ubuciko bendawo ngabaculi baseCaymanian.
IStingray City iyindawo edumile kaCayman futhi nesipiliyoni esiyingqayizivele lapho ungabona khona, uthinte, futhi ubambe ngisho ne-stingray! “Idolobha” liyisitishi seshlabathi eduze kwesiteshi esisezandleni zomgoqo waseCayman. Ngokomlando, umdobi wayevame ukuza esandeni lokuhlanza izinhlanzi ababezibambe usuku lonke. Baconsa izingcezwana ezingafuneki ngaphezulu, okwaqala ukuheha ama-stingrays. Ekugcineni, lo mkhuba wakhula waba umsebenzi wabavakashi. Ama-stingrays ahlala olwandle futhi empeleni ayizilwane zasendle, kepha ajwayele abantu futhi athuthela endaweni efuna izikwati zama-squid ezivela kubaqondisi nabavakashi. Uma kwenzeka ucabanga ukuthi ama-stingrays azwakala eyingozi, ungakhathazeki. Banaso isigaxa esisesabekayo eduze komsila, kodwa ngeke basisebenzise kuwe. Ukulimala kwe-Stingray kwenzeka kakhulu lapho izinyathelo ze-beach-goer ezingalindelekanga ku-stingray yokulala ifihlwe esihlabathini emaphethelweni amanzi. Iseluleko esijwayelekile ukumane ushintshe izinyawo zakho ukuze ugweme ukunqamula kwenye ngephutha. Iningi labashayeli bezokuvakasha ligijimisa abagibeli bezikebhe eStingray City, kwesinye isikhathi lihambisana neminye imisebenzi enjengokudonsa ngamatshe noma ukuhamba ngomkhumbi.
Kuyini amakhorali? Ama-coral abukeka njengamadwala noma izitshalo ezingaphansi kwamanzi, kepha empeleni yiqoqo lezilwane ezincane!
Kungani ama-coral ebalulekile? Izixhobo zamakhorali zihlukahlukene kakhulu futhi zibamba iqhaza elibalulekile empilweni yolwandle nasemhlabeni!
Zisebenza kanjani izingulule zamakhorali? Uxolo ukusho, kepha amadwala wamakhorali emhlabeni awenzi kahle. Ukushisa komhlaba kanye nokuphazamiseka komhlaba kubangele ukulimala okulinganiselwe kwezigxobo eCayman nasemhlabeni jikelele.
Ungazivikela kanjani izigodi? Umthetho wokuqala awukumi phezu kwamakhorali! Ama-corals abuthaka kakhulu futhi uma wonke isivakashi esiqhekeze ucezu oluncane lapha nalaphaya, yonke imbala ibizodilizwa ngokushesha. Gwema ukugqoka i-sunscreen lapho u-snorkeling noma ukhethe imikhiqizo ephephile yomhlanga. Ngokuphathelene nobungani be-eco-, i-Cayman isemuva kwamanye amazwe athuthukile. Amadola ezokuvakasha anethonya elikhulu eCayman, ngakho-ke bonisa ukusekelwa kwakho kwemikhiqizo eqaphela imvelo namaqembu okuvakasha!
Lonke ulwandle namabhishi eCayman kubhekwa njengempahla yomphakathi. Ngisho nasezindaweni ezinamahhotela okunethezeka okusanhlamvu, amabhishi angawowonke umuntu. Izindawo eziningi zimake izindlela "zokufinyelela ogwini lomphakathi" eziholela kusuka endleleni eya ebhishi phakathi kwezakhiwo noma amahhotela. Amabhishi awaqashwa ngabaphathi bezempilo. Ziyahlukahluka ngokwezinto ezisizakalayo. Abanye banama-docks, amabhentshi, izindlu zangasese, izindawo zokukhosela, nemishiza yamanzi emisha kanti abanye abagcinwa kangako.
I-Mile Beach Eyisikhombisa. Ibhishi elidume kakhulu eCayman. Amamayela amamitha amade wesanti elimhlophe qhwa ngasenyakatho neGeorgetown.
Ibhishi lamathuna. Ngobuchwepheshe ingxenye yeSeven Mile Beach. Enyakatho yezindawo ezihamba phambili zabavakashi.
Ibhishi Lombusi. Lesinye isigaba seSeven Mile Beach, eduzane namahhotela amakhulu.
IBarcadere kaSmith. Ibhishi elincane elinesihlabathi esihle, izihlahla zomthunzi, kanye nama-surf amaningi izinsuku eziningi. Okudumile ngabantu bendawo kanye nabathengisi bezinyoka.
Ibhishi le-Spotts. Indawo encane yolwandle evikelekile kusuka kumagagasi yi-coral yedwala lesithiyo.
Wake wezwa ngawo Australia'S I-Great Barrier Reef? Hhayi-ke, uCayman unomuthi wesingqinamba futhi, futhi uyiphupho le-scuba diver! Uma usuvele uqinisekisiwe, kunezindlela eziningi zokukhetha ukugxila olwandle noma indawo esikebheni sokuntywila. Kukhona futhi ongakhetha kukho kokuthi "kuzame" ukudonsa okujabulisayo kwabaqalayo okungadingi isitifiketi.
Ufuna ukubheka impilo yakho yasolwandle okokuqala? Uzodinga imaski, ishubhu le-snorkel, nejinjini. Izitolo eziningi dive ziqasha amagiya, noma uma ujoyina uhambo oluhlelekile lwe-snorkel zizokunikeza ezinye. Kuthatha kancane ukujwayela, kepha ungabona izinhlanzi eziningi ezihlanzekile ngaphandle kokuya kude nolwandle, ngakho-ke zinikeze ithuba! Ungazondli izinhlanzi! Abanye abantu bacabanga ukuthi yinhle, kepha empeleni ukudla okungenampilo kubo, futhi kuyabaqeqesha ukuxosha izivakashi abafuna i-handout. Futhi qaphela: ama-chubs aluma!
IBatabano, i-Grand Cayman carnival, yenzeka ngasekupheleni kuka-Ephreli noma ekuqaleni kukaMeyi. IBatabano yimpelasonto yomculo we-live sensimbi, abaxhamli abahamba ngemigwaqo begqoke izingubo ezimibalabala, bedla nokudla okungajwayelekile. UCayman Brac uphethe umgubho obizwa nge “Brachanal” ngoMgqibelo olandelayo ngemuva kwe-Grand Cayman.
Umkhosi Weviki lePirates, eGeorge Town ngemicimbi ezweni lonke. Mid-Novemba (2008: Novemba 6-16). Izicishamlilo, "indawo yokuhlala izitha", umdanso wasemgwaqweni, imicimbi yosuku lwamagugu emadolobheni aseCayman.
Gimistory: ICryman Islands International Storytelling festival Izwe lonke. Novemba.
I-Cayfest: UMkhosi Kazwelonke WamaCayman Islands Obuciko. Ukugubha ubuciko bendawo, ubuciko, umculo, umdanso, idrama njll. Ephreli
Ngenxa yesimo sendawo esivamile esivamile, akukho okunengi ukuhamba ngezinyawo ongakwenza. Kodwa-ke, lesi siqhingi sigcina indlela eyodwa yezwe ebizwa ngokuthi iMastic Trail. Umzila usayiniwe kahle, futhi izinkambo eziqondiswayo ziyatholakala.
Amanye Amasayithi Nemisebenzi
AbakwaDolphin Discovery Across abaqhamuka eBootwain's Beach, abantu bavunyelwe ukubhukuda namahlengethwa
Izindiza zeCayman Crystal, 69 North Sound Road, Old Man Bay. Uhambo lomzuzu we-90 lwezindawo ezintathu zomhume ku-North Shore yaseCayman. Kulula ukufinyeleleka futhi kuyathakazelisa kakhulu.
Idola laseCayman Island (KYD) iyunithi lwemali lesishiyagalolunye elinenani eliphakeme kunawo wonke emhlabeni kanye neyunithi yedola elibaluleke kakhulu; qaphela futhi wazi njalo uma ukhokha ku-CI noma amadola aseMelika!
Kusukela i-1972 i-Cayman Islands inemali yayo, okuyiyunithi yayo eyisisekelo yedola, ekhishwe kumanothi ngama-CI $ 100, 50, 25, 10, 5 kanye ne-1 nezinhlamvu zemali ezibiza amasenti angu-25, i-10, i-5 ne-1. Idola le-CI linesilinganiso sokushintshwa okushintshiwe nedola laseMelika le-CI $ 1 lilingana ne-US $ 1.22. Noma, idola laseMelika lilingana ne-CI $ .82.
Idola laseMelika lijwayelekile futhi lamukelwa amahhotela, izindawo zokudlela kanye nezitolo ngesilinganiso sedola elilodwa laseMelika kuwo wonke amasenti e-80 Cayman Islands, ngoshintsho oluvame ukunikezwa ngamadola aseCayman Island.
Izitolo eziningi zithengwa eGeorge Town naseSeven Mile Beach eGrand Cayman.
ICaymanite yitshe eliyigugu eliyigugu leCayman Islands.
I-Black Coral ijwayele ukusetshenziswa ubucwebe lapha.
Ikhekhe leRum elivela eTortuga Rum Company lithandwa kakhulu nezivakashi eziseGrand Cayman.
Kukhona izitolo eziningi zabavakashi lapho ungathenga khona izikibha, izigqoko, amakhadi okuthumela, nokunye okuningi. Ungathengi noma yiziphi izinqola zasolwandle; ukuhamba ebhishi kumnandi kakhulu, futhi kushibhile.
Cishe yonke into kumele ingeniswe futhi ingaphansi kwentela yokungenisa eyi-20% (kwesinye isikhathi iphakeme, kuya ngomkhiqizo); ukudla nezinye izinto kuyabiza.
Amathonya obuciko ezifundeni eziningi ayabonakala ku-Cayman cuisine. Ubuchwepheshe bendawo njengezinhlanzi, ufudu, ne-conch kumnandi futhi kubiza kakhulu ngoba akudingi ukungeniswa ezweni. Njengoba kunezindawo zokudlela ezingaphezu kwe-150, ukungafiki kokudla okuhle eziQhingini zaseCayman kungafaka indawo yokudlela e-chic enezinkanyezi ezinhlanu nendawo evamile engaphansi kwezinkanyezi, noma umcimbi ohleliwe. Ukusuka ekudleni kwasolwandle kwendabuko yaseCaymanian kuya eCaribbean kuya e-Thai kuya e-Italian nase-New World cuisine, abadli bokuqonda bayaqiniseka ukuthola into ezokwenza ukunambitheka kwabo. Ezinye izinketho ezithokozisayo zihlanganisa ukuhamba ngesikebhe sakusihlwa kuma-catamaran okunethezeka ngisho nomkhumbi omude oyiqiniso.
Ngenkathi useCayman cela umshayeli wetekisi wakho ukuthola indawo ayithandayo yasendaweni iJerk Stand (kumele uzame), futhi ubabuze indawo yezivakashi abasikisela yona. Inani elifanelekile leGluten Free, Organic, neKosher Foods liyatholakala ezitolo ezinkulu zasendaweni, thintana nomphakathi wamaJuda waseCayman weShabbat Dinner.
Ukuthola isabelomali sokudla esiqhingini saseCayman kwesinye isikhathi kungaba nzima njengoba izindleko zokuphila ziphakeme kunakwamanye amazwe kubandakanya nezindawo ezihlangene. Izindawo zokudlela eziningi ziyabiza. Kodwa-ke, zisekhona izinketho ezimbalwa zezindawo zothando ezingathandeki.
Ukudla kwendawo yokudlela kungabiza kakhulu kwa-Grand Caymen, ngisho nokudla okusheshayo.
Utshwala buyabiza eziqhingini, ngisho nasezitolo zotshwala.
Izitolo ezidayisa utshwala divalela e-22: 00, futhi zivalwa kakhulu ngamaSonto.
Izivakashi ezindiza eziqhingini zaseCayman ziyakwazi ukuletha noma i-1 ibhodlela lemimoya yamahhala, i-4 amabhodlela ewayinini noma e-champagne, noma iphakethe elilodwa likabhiya we-12 kabhiya ngeminyaka engu-18 weminyaka yobudala noma ngaphezulu. Ukungezelela lesi sibonelelo somsebenzi kuzophumela ekuthini kube nentela enkulu ezintweni ezingeqile.
Izinhlobo ezahlukahlukene zokuphuza zasendaweni ziba ngamanani nezisekelo zabathengi kepha kepha zigcina umuzwa we-Island flair.
Izindawo zokuhlala ziningi kepha zivame ukubiza kakhulu, ngisho naseziqhingini ezimbili ezincane. Kukhona izindawo zokungcebeleka eziningana ezinempilo nazo zonke izinsiza, kanye nezinye izinketho ezingabizi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, izindleko zokudla neziphuzo ziphezulu eCayman, kepha izivakashi eziningi zihlala kumakhondomu anemishini yasekhishini futhi zisebenzisa ithuba elikhulu ezitolo ezinkulu zekilabhini kanye nompheki kanye nezosobe ogwini.
ICayman ayaziwa ngezindawo zokudlela ezibandakanya konke, kepha kunezindawo ezimbili ezincane zesitayela seCaribbean ezinikeza le nketho.
Iningi lamahhotela nezindawo zokuphumula ziseGrand Cayman, lapho ihhotela "eliyisiqalo" esikhulu yiSeven Mile Beach, okuyikhaya lamahhotela amakhulu amakhulu kanye namakhondomu amaningi. I-Seven Mile Beach yibhishi lomphakathi, ngakho-ke uyakwazi ukuhamba lonke ubude lolwandle.
I-Off Seven Mile Beach yindawo yokuphumula eyimbili futhi, eziFundeni zaseMpumalanga, amakhaya amaningi abantu kanye nezigceme, kanye nezindawo eziningi zokungcebeleka nokuhehayo kulabo abathanda iholide elinokuthula okwengeziwe.
I-Little Cayman igxile ekuphumeni kwe-dive futhi ine-charm eyingqayizivele, kanye nezinye izindawo ezinhle kakhulu zokudonsa noma kuphi.
Awekho amakamu kunoma yisiphi isiqhingi futhi ukukhempa kuyivelakancane ngaphandle kwesikhathi sePhasika. Kukhona isiko le-Easter phakathi kwamaCaymaniya wokukanisa olwandle.
Uma ufuna ukuhlola iziqhingi zaseCayman, indawo yokuhlala iyabiza e-Grand Cayman, kepha ukuqasha indawo yokuphumula kuyindlela eshibhile.